Dagaal dad badani ku dhintay oo maanta ka dhacay Galkacyo & xaaladda oo hadda deggan. – Radio Daljir
Galkacyo, Dec 24- Maalintii labaad ayaa iska-horimaaddo xooggani ka socdaan suuqa magaalada Galkacyo, kuwaasi o u dhaxeeyey ciidamada maamullada Puntland iyo Galmudug ee ka wada arrimiya magaalada Galkacyo.
Dagaalka maanta oo aad u kululaa ayaa gaystay khasaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jira, waxaana inta la xaqiijiyey ku dhimatay illaa 13 qof halka dad ka badan 55 qofna ay dhaawacmeen.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa iskugu jira garabyadii dirirtu dhaxmartay iyo dad rayid ah oo rasaas habaw ahi ay ku dhaceen, waxaana wararku tilmaamayaa dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba in ay ku jiraan 3 qoys oo guryahoodii madaafiic habaw ahi ay ku habsatay halkaasi oo carruur iyo haween ku waxyeelloobeen.
Dagaalka ayaa galabta hakaday, mana jiraan xilligaan wax dhawaqa rasaasta ah oo laga maqlayo gudaha magaalada Galkacyo, hase ahaatee meelihii lagu dagaallamay wali waxaa is horfadhiya ciidamadii dagaalku u dhaxeeyey.
Dagaalkaan ayaa curtay shalay kadib markii toogasho lagu dilay askari ka tirsan ciidanka maamulka dawladda hoose ee Puntland, kaasi oo raggii dilay ay u baxsadeen xaafadda wadajir ee koonfurta magaalada Galkacyo.
Ma jirto cid illaa iyo haatan u istaagtay daminta xiisaddaan ama ku hawllan sidii wadahal loogu badali lahaa dagaalka, waxaana sidoo kale wali jirin wax war ah oo ka soo baxay maamullada oo ku saabsan qorshahood xiisadda colaadeed ee haatan taagan.